प्रधानमन्त्री ओलीको नजरमा रवीन्द्र अधिकारी : आँखामा हाल्दा नबिझाउने, काममा सधै अब्बल - Janata Times
प्रधानमन्त्री ओलीको नजरमा रवीन्द्र अधिकारी : आँखामा हाल्दा नबिझाउने, काममा सधै अब्बल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन हुनुभएका तात्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा देखिनेगरी असाधारण काम गर्नुभएको बताउनु भएको छ ।
जुन काममा लगाए पनि सफल हुने छवी बनाउनु भएका नेकपाका नेता तथा मन्त्री अधिकारीले एक बर्षको अवधीमा आफ्नो काममा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट पार्नुभएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकका लागि शुरोजंग पाण्डेसँग दिवंगत नेता तथा मन्त्री अधिकारी बिषयमा कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आँखमा हाल्दा पनि नबिझाउने भन्दै अधिकारीको निधनले सिंगो राष्ट्रलाई ठुलो क्षती पुगेको बताउनु भएको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा भएको दुःखद निधनबाट तपाईंले एउटा सहयात्री गुमाउनुभएको छ, मुलुकले एउटा आशालाग्दो युवा मन्त्री र नेता गुमाएको छ । एउटा युवा नेता तथा मन्त्रिपरिषद्को सदस्यका रूपमा उहाँलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
हामी सबैलाई थाहा छ, हामी सबैका अत्यन्तै प्रिय मित्र, हाम्रो संसदीय दलका एउटा यस्तो सदस्य जो आँखामा हाल्दा नबिझाउने हुुनुहुन्थ्यो । सधैँ प्रसन्न चित्त र फरासिलो, मिजासिलो र हाँसोका साथ प्रस्तुत हुने उहाँले हाम्रो संसदीय दललाई प्रभावकारी बनाउन, सफल बनाउन, त्यसको प्रतिष्ठा बढाउन अत्यन्तै महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको थियो ।
उहाँ ०६४ र ०७० मा दुईपटक संविधानसभामा तथा पछिल्लोपटक ०७४ संसदमा कास्कीबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । जनताका बीचमा अति प्रिय, त्यसकारण उहाँ तीनैपटक निर्वाचित भएर आउनुभयो । विद्यार्थी राजनीतिदेखि विद्यार्थीको नेतृत्वमा रहेर र पार्टी कार्यकर्ताको हिसाबले समेत उहाँले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको सफल जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा वहन गरिरहनुभएको थियो ।
नचलेका विमानस्थल चालू गर्ने, विमानस्थलहरू स्तरोन्नति गर्ने, जुन विमानस्थल दिउँसो मात्रै चल्थे तिनीहरूलाई राति चल्ने बनाउने काममा उहाँको सक्रियता थियो । अहिलेसम्म ६ वटा विमानस्थल राति पनि प्लेन उड्ने, बस्ने बनाइसकिएको थियो । जनकपुर विमानस्थल अब दुई महिनाभित्र राति उड्ने सुविधासहितको हुँदै छ । धनगढी, विराटनगर र चन्द्रगढी विमानस्थल विस्तार गर्ने र दाङमा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने योजनामा उहाँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो । झापाको विमानस्थल विस्तारको योजना थियो । यस्ता थुपै्र काम, विमानस्थलको स्तरोन्नति र सुधारका कामहरू भइरहेका थिए ।
विमानस्थलसम्बन्धी कामकै सन्दर्भमा उहाँ तेह्रथुमको चुहानडाँडामा इन्जिनियरिङ, सर्भे आदिबाट उपयुक्त ठाउँ छ, आवश्यक छ, त्यहाँ निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने रिपोर्ट आइसकेपछि आफैँ गएर हेर्ने र आफैँले हेरेर उपयुक्तता, अनुपयुक्तता छुट्याउने भनेर त्यहाँ जानुभएको थियो । उहाँ त्यो स्थानमा सकेसम्म २ वर्षभित्रै विमानस्थल बनाउन कस्सिनुभएको थियो । भोलिपल्टै उहाँ जर्मनी उड्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ जानुको अर्थ पनि थियो । म्युनिख एयरपोर्टको व्यवस्थापन कार्यसँग उहाँ लुम्बिनी एयरपोर्टलाई तुलना गर्दै हुनुहुन्थ्यो । यसरी उहाँले नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा देखिनेगरी असाधारण काम गर्नुभएको छ । सांस्कृतिक क्षेत्रमा भन्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै केही समयअगाडि पनि उहाँले नेपालको टिम कम्बोडिया पठाउनुभयो । नेपाली टिमले आफ्नो बेग्लै पहिचान बनायो ।
यस सम्बन्धमा मुक्तिनाथको कुरा होस् वा पशुपतिको, लुम्बिनीको कुरा होस् वा जनकपुर यी विभिन्न सांस्कृतिक स्थानहरूको विकास र तिनको प्रचारप्रसार तथा ती ठाउँलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा उहाँले लिएका रुचि र कामहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । उहाँ पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष मनाउने, त्यस सम्बन्धमा एकातिर उडड्यनको क्षेत्रमा, एयर सर्भिसको सेक्टरमा, अर्कोतिर पर्यटनलाई ध्यानमा राखेर ०७६ वैशाख १ गतेदेखि बुटिक एयरपोर्टको रूपमा रूपान्तरण गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । रचनात्मक ढंगले त्यस्तो काम गर्ने एउटा व्यक्ति अस्तिको हेलिकोप्टर दुर्घटनाबाट अस्ताउनुभएको छ जुन अत्यन्त अप्रत्याशित र पीडादायी थियो ।
युवा नेताको असामयिक निधनपछि उहाँप्रति सहानुभूति राख्नेहरूको ठूलो पंक्तिले दुःख व्यक्त गरेको छ, शोक मनाएको छ । उहाँका अधुरा सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीको सिंगो पंक्तिले व्यक्त गरेको समाचार पनि आएका छन् । कास्की–२ ले जननिर्वाचित सांसद र मन्त्री गुमाएको सन्दर्भमा उपनिर्वाचनमार्फत नयाँ प्रतिनिधि चयनबारे सरकारले के सोच राखेको छ ? सँगसँगै नेकपाले अब कसलाई उम्मेदवार बनाउँछ भन्ने आमचासो पनि छ । पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा यसबारे केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
हामी अहिले शोकमा छौँ । अहिले नै यस्तो संवेदनशील विषयमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यद्यपि निर्वाचनमा उम्मेदवार तय गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीमा सुस्पष्ट विधि र प्रक्रिया छन् । पद्धति र प्रक्रियाअनुरूप नै पार्टीले निर्णय लिनेछ ।
नेपालका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा हवाई दुर्घटनाका शृंखला दोहोरिरहेका छन् । दुर्घटनापछि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बन्छन् र ती आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछन् । तर, सुझाब कार्यान्वयन नहुने गरेको यथार्थबीच पाथीभरामा भएको दुर्घटना छानबिन गर्न पनि यो सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाएको छ । यो आयोग विगतको भन्दा कुन हिसाबले पृथक छ र सुझाब कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?
दुर्घटना भएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस सम्बन्धमा विस्तृत जाँचबुझ गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन यथाशीघ्र पेस गर्न जाँच आयोग गठन गरिसकेको छ । यस्तो दुर्घटना किन भयो ? कसरी भयो ? भविष्यका लागि हामीले कस्तो सतर्कता अपनाउनुपर्ने हो ? सुरक्षाको पक्षमा अझ बढी के –के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो ? यस घटनाले सतर्कताका सम्बन्धमा अरू बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा दर्शाएको छ । भविष्यका लागि हामीले यस दिशामा काम गर्नैपर्ने अवस्था छ । आयोगले निष्पक्ष रूपमा गहिरो छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ । त्यसपछि प्रतिवेदनलाई हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।
हाम्रो संसदीय दलका एउटा यस्तो सदस्य जो आँखामा हाल्दा नबिझाउने हुुनुहुन्थ्यो । सधैँ प्रसन्न चित्त र फरासिलो, मिजासिलो र हाँसोका साथ प्रस्तुत हुने उहाँले हाम्रो संसदीय दललाई प्रभावकारी बनाउन, सफल बनाउन, त्यसको प्रतिष्ठा बढाउन अत्यन्तै महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको थियो
विभागीय मन्त्रीको असामयिक निधनपछि मन्त्रालय रिक्त छ, सरकार भिजिट नेपाल २०२० योजना कार्यान्वयनको तयारीको चरणमा छ । यस पृष्ठभूमिमा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको पदपूर्ति कहिले गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
यथोचित समयमा यो काम पनि हुनेछ । तपाईंहरूले यथासमयमा जानकारी पाउनु नै हुनेछ ।
सत्रु गते को शुभसाइत, विरगञ्ज र काठमाडौमा छायाकंन हुने
माओवादी केन्द्रको कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर बम विष्फोट, ५ जना घाइते
यस कारण सरकार गठनमा ‘फोरम निर्णायक’ भुमिकामा